Ruzivo Kuwedzeredza uye Infographics | Martech Zone
Ruzivo Kuwedzeredza uye Infographics
Mazuva ese tinoongorora zvatinozivisa kubva Meltwater, kana kutsigira, uye ongorora akawanda emashamba-ane hukama infographics pawebhu. Vhiki yega yega isu tinosarudza kusaburitsa mazana e infographics, zvakadaro. Isu tinokudziridza infographics pachedu uye hazvisi zvekuti isu tiri snobs ... ingori kuti isu tinonzwisisa zvinoita infographic basa uye chii chisingadaro.
Iyo yakagadzirirwa-yakagadzirirwa infographic isina ruzivo rwakanyanyisa ine zvinotevera:
Nyaya Inonakidza - mune hwayo hwese, panofanirwa kuve nechimwe dingindira kuunganidziro yedata uye mifananidzo. (Maona Kudzivirira Kumba Kupaza-mukati iyo yakavambwa yakatenderedza Halloween)
Kutsigira Tsvagiridzo - kusimbisa iyo nyaya, zvakakosha kuti infographics iine mareferenzi kune wechitatu bato ongororo. (Maona Kuongorora kwekutungamira Scoring)
Mhedziso - sumo inogara yakanaka, asi mhedzisiro inofanirwa. Iwe uchafurira sei mumwe munhu usina kunyatso kutyaira iyo data uye nyaya kusvika kumagumo? (Maona Sei Proposal Management Software iri Boosting Bhizinesi)
Chiratidzo - ndiwe ani uye nei uri chiremera pane iyi nyaya? Iwe unogona kushamisika kuti mangani infographics andinoongorora ayo akanaka… asi uchishaya chero nzira yekuziva kwainobva. (Maona Maitiro Ekuvaka iyo Dhata Center)
Dana-Ku-Chiito - Ini ndichangobva kutsoropodza kambani nekuda kwekushaya kwavo CTA pane yavo infographic. Ivo vakati ivo vaisada kusangana ne kutengesa. Handina kumbobvira ndavati ndivatengese ... Ndakangovaudza kuti vanofanira kutaurira mushanyi zvekuita zvinotevera. (Ona iyo Bhizinesi Nyaya yeDhijitari Asset Management)
Akawandisa infographics anongokanganisa boka rezviitiko zvinoorora mukugadzirwa kwakanaka. Mhedzisiro yacho ruzivo rwakanyanyisa. Vanhu vanorasika uye vakavhiringidzika neiyo data pane iyo infographic inodzidzisa muverengi pane izvo chinangwa chiri kumashure kweiyo infographic.
Iko kune kusarudzika, hongu, senge zvinosetsa infographics (tarisa yedu Sangano Rudo uye Kuroora uye Nei Vanhu Vachikuteedzera pa Twitter) kana mbichana mbichana infographics (tarisa Matanho gumi Ekugadzirisa Dambudziko rekutaurirana).
Tags: infographicinfographic mienzanisoruzivo rwakanyanyisa